Chautari Daily » को हुन आइएमई नेपाल लोक स्टार को फाइनलमा पुगेका रामकुमार नेपाली ?
को हुन आइएमई नेपाल लोक स्टार को फाइनलमा पुगेका रामकुमार नेपाली ?
काठमाडौं / रामेछाप मन्थलीका रैथाने हुन् रामकुमार नेपाली। काठमाडौं अडिसनमा गोल्डेन माइक जितेर उनले लोकस्टारमा सानदार प्रवेश पाएका थिए। २०६१ सालदेखि उनी लोकसंगीतमा लागी परेका हुन्।
ललितकला क्याम्पस भोटाहिटीमा उनले डिप्लोमा इन म्युजिक विषयमा ४ वर्ष औपचारिक अध्ययन गरे। रामेछापदेखि काठमाडौंसम्मको यात्रा उनको सहज भने पक्कै थिएन। कलाकार बन्ने रहरले उनलाई कहिले घर बनाउने मिस्त्री बनायो त कहिले मजदुर। तर पनि लोक गीत गाउने हुटहुटीले छोडेन।
उनका मेरी आमा, चौबन्दीको फुर्का, दुई रुपैयाँको बिँढी लगायत डेढ दर्जन एल्बमै बजारमा छन्। करिब तीन सय लोकगीतमा स्वर दिइसकेका छन्। तर उनका गीतले खासै चर्चा पाउन सकेको थिएनन्।
घरबाट खासै सहयोग पाउँदैनथे। २०६६ सालमा रामेछाप लोकतारामा पहिलो स्थान जितेपछि उनको बाबाको मन फेरियो। एल्बम निकाल्न सकेको आर्थिक सहयोग गर्न थाले।
बन्द कोठामा मादल र किबोर्ड चलाउँदै रियाज गरिरहने रामकुमार सानो साथी सर्कलमा मात्रै सीमित थिए। उनी हुर्केको समाजमा सालैजो, टप्पा, कौडा, देउडा, हाक्पारे सबै खालका भाका गाइन्छ।
उनलाई लोकगीतका सबै भाका प्यारो लाग्छ। किन त ? भन्छन्, ‘लोक भनेकै माटोको गीत। चाहे सुदूरको गीत होस् या मधेसको ताल होस्। लोकगीत आमाको माया जस्तो लाग्छ। लोकगीतमा आफू हुर्केको माटोको गन्ध आउँछ। नेपालीपनको मिठास आँउछ।’
रामकुमार नेपाली लाई आगामी कात्तिक ८ गते मध्याह्न १२ बजे सम्म भोट गर्न सकिन्छ। भोट गर्न L 23 लेखेर 37000 मा म्यासेज गर्नु पर्नेछ।
प्रकाशित मिति १ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ०९:२८